हेर्नुश काठमाडौँमा यस्तो भव्य बंगला किन्ने तयारीमा थिए पल शाह – Nep Stok
हेर्नुश काठमाडौँमा यस्तो भव्य बंगला किन्ने तयारीमा थिए पल शाह
फागुण २५, २०७८ बुधबार 139
काठमाडौँमा यस्तो भव्य बंगला किन्ने तयारीमा थिए पल शाह, एक वर्षमा मात्रै करिब २ करोड कमाएका पल सोही घरमा लकेर ४ दिनसम्म बसेको रहस्य बाहिरिएपछि बल्ल तनहुँ पुगेका रहेछन्, भिडियोमा हेर्नुहोस् पलले किन्ने तयारी गरेको उक्त भव्य महल, जहाँ पलले अर्को वर्ष विबाह गरेर बेहुलीलाई भित्र्याउने समेत तयारी गरेका थिए
आइतबारदेखि तनहुँ प्रहरीको हिरासतमा रहेका कलाकार पल शाहविरु द्ध प्रहरीले संकलन गरेका तीन प्रमाण पलविरुद्ध लागेको आ रो ,प पुष्टि गर्न बलियो हुने देखिएको छ।
जिल्ला अदालत तनहुँबाट सात दिनको म्याद लिएर अ,नुस,न्धानमा खटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँको टोलीले पल र पी,डि,त किशोरीबीच भएको एउटा अडियो कुराकानीलाई बलियो प्रमाणका रुपमा अदालतमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ।
सोसल मिडियामा अनेक अडियो छरपस्ट भएका छन् तर, प्रहरीले पलवि रुद्ध लागेको नाबालिग आ ,रो, प पुष्टि गर्न सहयोग पुग्ने एउटा अडियोलाई प्रमाणका रुपमा पेश गर्ने तयारीमा छ। उक्त अडियोमा पलले पीडित किशोरीतिर संकेत गर्दै स्पष्ट भनेका छन्
त्यसो त पीडितले जहाँजहाँ आफूमाथि भएको आ रोप लगाएकी छिन्, त्यहाँ उठाउने, बयान लिने लगायतका काम पनि प्रहरीले गरिरहेको छ। सँगसँगै तनहुँ प्रहरीलाई पलले गरेको हुने केही फेसबुक च्याटका स्क्रिनसट पनि प्राप्त भइसकेको छ, जसलाई उसले अदालतमा प्रमाणका रुपमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ।
नाबालिग प्रमाणित : पलविरुद्ध उजुरी गरेकी पीडित किशोरी नाबालिग नै हुन्? अर्थात् उनको उमेर १८ वर्ष मुनि नै हो भन्नेमा पल पक्षधर एउटा समूहले सोसल मिडियामा अनेक आशंका प्रकट गरिरहेको छ। तनहुँ प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा पीडित किशोरीको उमेर पहिल्याउँदा उनी नाबालिग भएको प्रष्ट देखिएको छ।
प्रहरीकहाँ आइपुगेको पीडितको जन्मदर्ता अनुसार उनको जन्म मिति २०६२ साउन ३ गते रहेको छ । यसरी हेर्दा गत ०७८ साउनमा उनको उमेर १६ वर्ष पूरा पुगेर १७ मा टेकेको देखिन्छ।
स्टेज कार्यक्रमका लागि विदेशसमेत पुगेकी पीडित गायिकाको पासपोर्टमा समेत कतिपयले प्रश्न उठाइरहेका छन्। तर, प्रहरीले प्राप्त गरेको पासपोर्टअनुसार पनि उनको उमेर नाबालिग नै देखिएको छ अर्थात्, सन् २००५ जुलाइ १८।
सोसल मिडियामा अनेक अडियो छरपस्ट भएका छन् तर, प्रहरीले पलविरुद्ध लागेको नाबालिग जबरजस्ती करणीको आरोप पुष्टि गर्न सहयोग पुग्ने एउटा अडियोलाई प्रमाणका रुपमा पेश गर्ने तयारीमा छ।
तनहुँ प्रहरी स्रोतअनुसार पीडित किशोरीको मेडिकल रिपोर्ट पनि पलविरुद्ध बलियो प्रमाण हुने देखिएको छ। ‘जन्मदर्ताले पीडित किशोरी नाबालिग देखिएको छ । मेडिकल रिपोर्टले पनि यौन सम्पर्क भएको स्पष्ट देखिएको छ। अडियो कुराकानीमा पलले यौनजन्य कार्य गरेको स्पष्ट संकेत गरेको छ। त्यसैले यी तीनवटै पलविरुद्ध बलियो प्रमाण हुने देखिन्छ,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो।
त्यसो त हिरासतमा रहेका पलसँग पनि प्रहरीले निरन्तर बयान लिइरहेको छ। तर, उनले भने आफूले पीडित किशोरीसँग शारीरिक सम्पर्क राखेको स्वीकार गरिरहेका छैनन्। म्युजिक भिडियो सुटिङ अर्थात् कामका क्रममा एउटै घर अर्थात् होटलमा बसेको स्वीकार गरे पनि शारीरिक सम्बन्ध राखेको भने उनले स्वीकार नगरेको प्रहरी स्रोतले जानकारी छ।
दुर्गेश र सम्राटको पनि बयान : बुधबार दिउँसो जतिबेला पललाई भेट्न अभिनेत्री पूजा शर्मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँ प्रवेश गरेकी थिइन्, त्यही बेला पीडितका आमाबुबा पनि त्यहीँ रहेको खबर त हामीले यसअघि नै प्रकाशित गरिसक्यौँ। त्यही समयमा काठमाडौंबाट बयानका लागि गायक दुर्गेश थापा र सम्राट चौलागाईं पनि प्रहरी कार्यालय दमौली आइपुगेका थिए।
बाहिर पल र पूजा समर्थक भीडले दुर्गेशविरुद्ध नाराबाजी गरिरहेको थियो। त्यही कारण प्रहरीले दुर्गेश र सम्राटलाई पूरै सं रक्षण दिएर प्रहरी कार्यालयको पछाडिबाट कार्यालयभित्र लगेको थियो।
पीडित परिवारले दिएको जाहेरीअनुसार कतिपय स्थानमा दुर्गेश र सम्राटको पनि उपस्थिति देखिएकाले प्रहरीले उनीहरुलाई बयानका लागि बोलाएको थियो। ‘दुर्गेश र सम्राटको बयान पनि पीडितकै पक्षमा छन्,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रवक्ता डीएसपी युवराज खड्काले पल प्र करण अ नुसन्धानको क्रममा रहेकाले तत्काल केही भन्न नमिल्ने बताए। ‘हामीलाई कुनै भीडले प्रभाव गर्दैन, हामी निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नेछौं। यसमा ढुक्क हुनुस्,’ उनी सबैलाई आश्वस्त हुन आग्रह गर्छन्।
Prevआज सुनको भाउले तोड्यो अर्को ऐतिहांसिक रेकर्ड, तोलाको कति ?
Nextसरकारी वकिलको कार्यालयमा पल शाह, हातमा ह’तकडी
वाथरुममा बेहो’स अवस्थामा भेटिएका काठमाडौं केएमसी कलेजका विद्यार्थीको मृ’त्यु
कुन गिरोह लागिरहेको छ नायक पल शाह विरुद्ध ?
पल शाह प्रकरण : पिडित गायिकाको नागरितामा यस्तो रहेछ जन्ममिति